काठमाडौंमा भेटिइन् अचम्मको अनुहार भएकी महिला ! (भिडियोसहित) - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौंमा भेटिइन् अचम्मको अनुहार भएकी महिला ! (भिडियोसहित)
काठमाडौंः संसारमा विभिन्न प्रकारका मान्छेहरु भेटिने गर्छन् । हालै नेपालमा पनि एक अचच्मको अनुहार भएकी महिला भेटिएको छिन् ।
मोरङ घर भई हाल काठमाडौं गौशालामा बस्दै आएकी कुमारी सुवेदी सामान्य मानिस भन्दा फरक छिन् । उनलाई झ्वाट्ट देख्ने मान्छे पक्कै पनि तर्सिन्छ । किनभने उनको अनुहार हेर्दा केहि डरलाग्दो नै छ ।
कुमारी ६ वर्षको उमेरमा नै यसरी अनुहार सुनिन थालेको थियो । जब उनको उमेर बढ्दै गयो अनुहारको बनावट पनि ठूलो हुँदै गयो । उनी २० वर्षकी पुग्दासम्ममा सुवेदीको अनुहार यतिसम्मको भयो तर अहिले भने त्यो क्रम रोकिएको कुमारी बताउँछिन् ।
उनको यस्तो अवस्था हुँदा कसैले पनि काम नदिने गरेको गुनासो पाेख्छिन् । उनले जसले जतिबेला जे काम दिन्छ त्यहि गरेरै दिन काटिरहेकी छिन्। उनले आफ्नो मात्रै शरिर पाल्न भएत केहि सहज हुने थियो होला तर ८२ वर्षकी आँखा नदेख्ने आमालाई समेत यस्तो अवस्थामा हेरिरहेकी छिन् । यो उनको साहस देख्दा निकै खुशी पनि लागेको छ ।
उनले यस भिडियो आफ्ना कथा सुनाईरहँदा जो कोहिका आँखाबाट आँशु रसाउछ । उनले आफ्ना पिडा सुनाउँदै गर्दा आफूलाई नचिन्नेहरु त आफूलाई देखेर भाग्ने गरेको बताउँछिन् । सुवेदीले कतिले त नजिक पर्दा गाली गरेको पनि व्यथा सुनाइन् । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
ट्याग्स: कुमारी सुवेदी